China Bathtub Brass Bath Tub Drain and Overflow with Trap ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | Jiyida သန့်ရှင်းရေး
အဖြူ/အရောင်သေတ္တာ (သို့) အရည်ကြည်အထုပ်
DECP BRASS BATH TUBE DRAIN ဖြစ်သည်
အသုံးပြုမှု ရေချိုးခန်း၊ BATHTUB
3. ထုတ်ကုန်ပျိုးပင် DIAGRAM
ကျွန်ုပ်တို့၏ superb ရောင်း ၀ ယ်မှုအရည်အသွေးကောင်း၊ ရန်လိုသောစျေးနှုန်းနှင့် China Brass Center Outlet ၏ထုတ်လုပ်သူ၊ အကြီးမားဆုံးသောပံ့ပိုးမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ယ်သူများအကြားထူးခြားသောအခြေအနေ၌ကျွန်ုပ်တို့ပျော်ရွှင်သည်။ နေ့စဉ်ဘဝအလွှာပေါင်းစုံမှစားသုံးသူအသစ်များနှင့်အဟောင်းများသည်ရေရှည်ဆက်ဆံရေးကုမ္ပဏီဆက်ဆံရေးနှင့်အပြန်အလှန်ကောင်းမွန်သောရလဒ်များအတွက်ငါတို့နှင့်စကားပြောရန်!
China Direct Connect Outlet, Brass Direct Connect Outlet ၏ထုတ်လုပ်သူ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ၀ န်ဆောင်မှု၊ ချက်ချင်းအကြောင်းပြန်ခြင်း၊ အချိန်မီပေးပို့ခြင်း၊ အရည်အသွေးနှင့်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းသို့ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး စားပေး ၀ ယ်ယူသူတိုင်းအားကျေနပ်မှုနှင့်ကောင်းမွန်သောချေးငွေ ကောင်းမွန်သောထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်စျေးသက်သာသောစျေးနှုန်းတို့ဖြင့် ၀ ယ်ယူသူများအတွက်အော်ဒါစီမံခြင်း၏အသေးစိတ်တိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်သည်။ ဤအပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းများသည်အာဖရိကနိုင်ငံများ၌အလွန်ရောင်းကောင်းသည်၊ ထိုTသူကမြောက်နှင့်တောင်အမေရိကအရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အရှေ့တောင်အာရှ 'ဖောက်သည်ပထမ၊ ရှေ့သို့ချီတက်' ၏စီးပွားရေးဒဿနကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းရန်ပြည်တွင်းပြည်ပမှဖောက်သည်များအားရိုးသားစွာကြိုဆိုပါသည်။
အဖွဲ့အစည်းသည်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအယူအဆ“ သိပ္ပံနည်းကျစီမံခန့်ခွဲမှု၊ သာလွန်သောအရည်အသွေးနှင့်ထိရောက်မှုကိုရှေးရှုသည်. ယနေ့အချိန်ထိရပ်နေပြီးအနာဂတ်သို့မျှော်ကြည့်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းရန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိဖောက်သည်များအားရိုးသားစွာကြိုဆိုပါသည်။
၂၀၁၉ အရည်အသွေးမြင့် Direct X Sweat Branch၊ ဖောက်သည်များ၏ ၀ ယ်လိုအားကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်သာကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များအားလုံးကိုမပို့မီတင်းကြပ်စွာစစ်ဆေးခဲ့သည်။ ငါတို့ကမင်းအနိုင်ရလို့ငါတို့အနိုင်ရတာမို့ဖောက်သည်တွေရဲ့မေးခွန်းကိုငါတို့အမြဲစဉ်းစားတယ်။
ရေချိုးကန် Drain Pipe
Bathtub ထဲဝင်လာတဲ့ Drain တွေ
Pop Up Bathtub ကို Drain လုပ်ပါ
Bathtub Drain ကိုဖယ်ရှားခြင်း
Bathtub Drain ကိုဖြုတ်ပါ
Bathtub အမှိုက်နှင့်လျှံနေသော Brass Bath Tube Drai ...
Bathtub အမှိုက်နှင့်လျှံနေသော Brass Bath Tube Drain
Bend Bathtub မှအမှိုက်နှင့်လျှံနေသောကြေးဝါများ ...